Egwú na Ọdịnihu Ekwentị | Martech Zone
Egwu na Ọdịnihu Ekwentị
Na Mọnde, Nọmba 20, 2012 Douglas Karr
Anyị anaghị ekwu ọtụtụ ihe gbasara ụlọ ọrụ egwu ebe a na teknụzụ teknụzụ azụmaahịa mana ya, ikekwe, otu n'ime ihe atụ kachasịnụ nke ịgbanwe agwa ndị ahịa. Anyị si na egwu egwu wepụta na ngwaọrụ egwu… ma ugbu a, anyị si na ngwaọrụ na-agagharị. Ahapụla m iTunes kpamkpam ma jiri ya ugbu a Spotify maka ihe niile. Nchọpụta na-eme site na netwọk mmekọrịta m na site na redio Spotify nke na-agwakọta dị ka ihe ụtọ egwu iji nye m ụda egwu ọhụrụ.
Maka ndị na-egwu egwu, ọ bụghịzị ihe mgbaru ọsọ ịkwụ agụụ ma kpọọ obi ha maka igwe mmadụ ọ bụla enwere ike ị nweta nlebara anya nke ndị isi ụlọ ọrụ ndekọ. Ha ka na-egwu obi ha, mana ugbu a, ọ bụ maka ịbịakwute ndị Fans site na mgbasa ozi mgbasa ozi. Rụpụta ndị na-ege ntị na mmekọrịta na ndị isi ndekọ na-eso. Ka egwu na-agagharị agagharị, ọ dị mkpa ịzụlite ọnụnọ mkpanaka na nke ahụ bụ ihe MobBase emeela - ịmepụta ngwa ọdịnala nke na-enyere ndị agha aka ịmalite isi nke ha mgbe ha na-ekesa egwu na ngwaọrụ mkpanaka ha.
Ihe omuma ihe omuma a sitere na MobBase na-enye ihe omuma banyere mgbanwe egwu di egwu na ndu ndu maka ndi okacha amara ya.
Tags: mobbasemobile ngwaegwu ekwentiMusicmusic ụlọ ọrụmusic mobile ngwaSpotify
Dị na Ahịa Ahịa: Kpachara Anya